မကြည့်ရဲသူများ မကြည့်ပါရန်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » မကြည့်ရဲသူများ မကြည့်ပါရန်…
Posted by ကို ထွဋ် on Jul 9, 2014 in Events/Fundraise | 13 comments
စောစောအိပ်လို့၊ စောစောထလို့၊ စောစော ကားတိုက်ကြပါစို့.. နောက်ဆက်တွဲ....
ဒီဓာတ်ပုံ ပိုင်ရှင်ဟာ ဦးအောင်စိုးဖြစ်ပါတယ်…
ကျွန်တော် မနေ့ကတင်တဲ့ ပို့စ် ” စောစောအိပ်လို့၊ စောစောထလို့၊ စောစော ကားတိုက်ခံကြပါစို့ ” က ဖြစ်စဉ် ၂ ပါ…
ကျွန်တော် ပြောခဲ့သလိုပဲ.. လက်သည်မပေါ်ဘူးဗျာ..
သိမိကြားမိရင် အကြောင်းကြားကြပါ.. ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်…
One day was passed. Still no car number & driver was found.Criminal case happened on July6evening 5-6 pm on concrete strand road near strand hotel. Please share this message to find out the murder. Help me please.
ဒါက အမျိုးတယောက်က FB မှာတင်ထားတဲ့ Original စာသားပါ…
စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ…တရားခံတော့ မိဖို့မလွယ်ပါဘူး :p:
မီးပွိုင့်တွေမယ်.. ကင်မရာတွေတပ်ထားတဲ့စနစ်ကို.. အကောင်အထည်ဖေါ်ရမယ်ထင်မိတယ်..။
အဲဒီနားလမ်းတလျှောက်က ရုံး..အိမ်..တွေမှာ.. လုံခြုံရေးကင်မရာရှိနေခဲ့ရင်.. ရဲအကူအညီနဲ့.. တောင်းကြည့်ပြီး.. ပြန်ရစ်ကြည့်သင့်ကြောင်း..။
ဟုတ်.. ကြားမိရင်တော့ သတင်းလေးပေးပါနော်…
ဟုတ်.. စုံစမ်းကြည့်လိုက်မယ်လေ… သူကြီး… ကျေးဇူးပါ.. ဒါပေမဲ့ မလွယ်လောက်ပါဘူးဗျာ.. သူက ကွန်တင်နာ အမြန်လမ်းကို သွားလျှောက်တော့ ကင်မရာလဲ ရှိမယ် မထင်ပါဘူးဗျ…
ဆုံးသွားတဲ့ အချိန်ကို ဆေးစစ်ချက်နဲ့ သိရတော့.. ဂိတ်တွေတော့ ရှိတယ်ဗျ.. အဲဒီမှာ ကင်မရာ တပ်ထားတယ်.. ခုနလေးတင်မှ မြို့ထဲ သွားရင်း ကြည့်ခဲ့သေးတယ်.. အဲဒီကားသာ တောက်လျှောက်ပဲ မောင်းခဲ့ရင်… သူလဲ တိုက်တာတော့ သိမှာပါ.. လူတယောက်လုံးကို တိုက်တာ.. ကင်မရာကို ရှောင်နိုင်သလို.. မသိရင်တော့ ဆက်မောင်းရင် ဂိတ်တခုစီက ကင်မရာမှာ စစ်လို့ရတယ်.. ဒါဆို ဖြစ်နိုင်တာတွေကို ဆွဲစိလိုက်ရင် မကြာဘူးထင်ပါတယ်… kai ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အိုင်ဒီယာ နည်းနည်းပေါ်လာလို့.. အမှုမှန်ပေါ်ရင် ထပ်ပြောမယ်လေ…
အူးခိုင် ၊ ကိုခိုင် ဒါမှမဟုတ် သူကြီးလို့ ခေါ်လဲရဒယ်နော် ရေမြေ့သနင်း၊
ကိုင်… ကိုင် ဆိုတော့ ဒဂျီးရယ် လက်တွေဘယ်ထားရမှန်းမသိဖစ်နေမယ်
ဟုတ်ဘူးဗျ.. နစ်နိမ်းကိုခေါ်တာ.. မှားမှာစိုးလို့လဲပါတယ်.. တခုပဲ အကြံပြုချင်တယ်.. ဘယ်သူစာရင်းထပ်ပြုစုမလဲ.. အပ်ဒိပ်လေ… ကလောင်နာမည်.. နာမည်ရင်းမဖော်ချင်လဲ ရတယ်.. ထား.. အသက်.. မှန်းခြေပြောပြဗျာ.. ကို ဆို ကို .. မ ဆို မ တပ်ခေါ်ရအောင်.. ဦး တပ်စေချင်ရင် ဦး တပ်ပေးမယ်… ပီးတော့ လိပ်စာ .. လက်ရှိပေါ့.. အစုံမဟုတ်တောင်.. ရန်ကုန်.. မန္တလေး.. အဲလို မြို့ကြီးတွေ ပြောစေချင်တယ်.. အခု ခရီးသွားရတော့မယ်.. ဒီည ဘယ်သူနဲ့ ဆက်သွယ်ရမှန်းကို မသိသေးဘူး.. အဲဒါ ရွာရဲ့ အားနည်းချက်ပဲ.. ဟွင့်.. ဟင့်.. တယောက်ယောက်လုပ်ပေးပါ.. ဒါပဲ…
ဒီနေ့ … ဟေ့ာလင့်လေး ဘဖ ပေါ်က တွေ့ မိတယ်ဗျာ….
ဒီပို့ စ် လေးနဲ့ များဆိုင်မလားလို့ကြည့်ကြပါအုံး…
GTC Car Journal Facebook Page က ပါ
ရေး ထားတဲ့ စာက…
ပန်းဆိုးတန်း နန်းသီတာဆိပ်ကမ်းရှေ့တွင် နားကြပ်ဖြင့်သီချင်းနားထောင်ရင်း လမ်းကူးသူတစ်ဦးသည် ကားဟွန်းတီးသံမကြားရသဖြင့် ယာဉ်တိုက်ခံရ. ။…. Credit – မိုးမခ
ပြောပြတာ ကျေးဇူး.. ဒါပေမဲ့ ဖွင့်မရပါ.. ယာယီပိတ်ထားသည်တဲ့..
ကွန်တင်နာတွေ အရမ်းမောင်းကြတယ် ….
အရမ်းမောင်းတယ်ဆိုတာထက် မူးပြီးရမ်းကားပြီးမောင်းတာ … ညနေ6 နာရီ ၀န်းကျင်ဆိုလျှင် ကမ်းနားလမ်းတစ်လျှောက် ထွက်ထွက်လာပြီ … အဲ့အချိန်ကနေ မိုးလင်း အထိ တဝေါဝေါနဲ့ ပြိုင်ကားမောင်းနေသလား မှတ်ရတယ် … ။
မျက်စိရှေ့တင် ကားတိုက်တာ မြင်ခဲ့ရဖူးတယ် …အဲ့လူက ကားပေါ်က ဆင်းပြီး တဖက်လမ်းကို မကြည့်ပဲ အကူး …. ကွန်တင်နာက အရှိန်နဲ့ ဖြတ်နင်းသွားတာ ဒိုင်းခနဲ တိုက်ပြီးပြီးချင်းကားအောက်ကို လျောဝင်သွားတာ .. … မြင်ရတော့ စိတ်မကောင်းဘူး ။ ကိုယ်နဲ့ အမျိုးသားချင်းမတော်စပ်ပေမယ့် သေခြင်းရှင်ခြင်း တဒင်္ဂအတွင်းမြင်ခဲ့ရတော့ လူတောင် ငိုင်ကျသွားတယ် စိတ်ထဲ တမျိုးပဲ မျက်ရည်တောင်ဝဲတယ် ။ ကွန်တင်နာကတော့ တိုက်ပြီး ဆယ်ကိုက်လောက် အကွာမှာ ထိုးရပ်သွားတယ် … ဒရိုင်ဘာ ဆင်းပြေးတာ ဖိနပ်တောင် မပါဘူး ။ ကားထားပြီးပြေးတော့ ပြန်မိမှာပါပဲ ။
မြို့တွင်းမှာ သတ်မှတ် မိုင်နှုန်းထက် ပိုမောင်းတဲ့ ကားတွေ ၊ ပြိုင်မောင်းတဲ့ ကားတွေ ၊ လိုင်စင်မရှိပဲ တက်မောင်းတဲ့ လူတွေ ၊ မူးယစ်သောက်စားပြီး ကားပေါ် မိန်းမ တင်မောင်းတဲ့ ကွန်တင်နာကားသမားလိုမျိုးတွေကို စိစစ်ပြီး ဖမ်းသင့်တာ … ခုတော့ …
ခုဟာက သူ့အမှားချည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. ကိုယ့်အမှားလဲ ပါတယ်.. အဲဒီလမ်းက ကွန်တင်နာ သီးသန့်ကားလမ်းဗျ.. ဒါပေမဲ့ တိုက်သွားတော့လဲ… စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပါ..